အမ်စတာဒမ်တွင် @Teradek #IBCShow မှ @IBCShow မှထုတ်လွှင့်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ထုတ်လွှင့် @Teradek #IBCShow ကနေအမ်စတာဒမ် @IBCShow အတွက် LIVE Beat
အသံလွှင့်၏ Janet အန်းအနောက်နိုင်ငံများ 2014 IBC Show မှာကို Canon, Sony နဲ့ Amberfin နှင့်အတူစင်ပေါ်မှာ Beat ။
အောက်ပါအတွက်အချိန်ဇယားနှင့် this post ရဲ့အောက်ခြေမှာခြင်းကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့ကြည့်ပါ!
အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း - www.broadcastbeat.com - အ 2014 IBC Show ကို၎င်း၏လွှမ်းခြုံကြေညာသည်
အမ်စတာဒမ်ကနေတစ်ဆင့်အတွင်း Show ကိုကြမ်းပြင်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့် Janet အန်းအနောက် featuring Teradek LIVE ။
ft ။ Lauderdale, FL (GCOMM) စက်တင်ဘာလ 11, 2014 - အသံလွှင့်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်, မဂ္ဂဇင်း၏ကိုယ်ပိုင် Janet အန်းအနောက်အမ်စတာဒမ်အတွက် 2014 IBC Show မှာပါလိမ့်မည် Beat Teradek'' s ကို UStream အသံလွှင့်အစာကျွေးခြင်း (www.ustream.com) ။ မှာ Show ကိုကြည့်ရှုပါ: www.IBCliveshow.com သို့မဟုတ်မှာမြင်ရ: www.broadcastbeat.com.
Janet ရှိသူများအပါအဝင်မီဒီယာကမ္ဘာမှာအများအပြားရာထူးဂုဏ်ရှိန်နှင့်လငျးအိမျနှငျ့စကားပွောပါလိမ့်မည် "မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု" "Post-ထုတ်လုပ်မှု" "ဒီနေ့ & မနက်ဖြန်နှင့်: အသံလွှင့်" "ယခုနှင့်ကျော်လွန်ပြီး 4K" ကဲ့သို့သောပူပြင်းသည့်အကြောင်းအရာများသို့မစူးစမျး မှ ကို Canon, Sony က, Panasonic လွန်စွာလိုလားသော နှင့် Autodesk (အောက်တွင်အပြီးအစီးစာရင်းနှင့်အချိန်ဇယားကို) ။
Teradekတစ်ဦး Vitec Group မှအမှတ်တံဆိပ်, ဝေးလံခေါင်ဖျားဗီဒီယိုရိုက်ကူးဘို့ကြိုးမဲ့ဗီဒီယိုက devices များ groundbreaking, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ ENG backhaul, Real-time စောင့်ကြည့်မှု, proxy ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် webcasts ထုတ်လုပ်တယ်။ ရှုပ်ထွေးသောကြိုးမဲ့ Workflows အဘို့, Teradek'' s ကို cloud-based လုပ်ငန်းအသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းအဝေးကနေတစ်စင်းကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းများအတွက်အစွမ်းထက် option ကိုထောက်ပံ့ Teradek ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာထံမှ Real-time အတွက်ကုတ်ဖြည်သည့်အရာများ။ အားလုံး Teradek ထုတ်ကုန် USA တွင်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ကြည့်ရှုပါ: www.teradek.tv
ထုတ်လွှင့် Beat မှာတိုက်ရိုက်အဆင့်အသံလွှင့်တွင်လိမ့်မည်:
11am - နေ့စဉ် 12pm, New York က EDT / 8am - 9am Los Angeles မြို့, ပီဒီတီ
5pm - 6pm (17: 00 မှ 18h: 00h GMT + 2) နေ့ရက်တိုင်း, အမ်စတာဒမ်အချိန်
အဆိုပါပြပွဲဟာအပေါ်ရာအရပ်ကိုကြာမြင့်မည် Teradek နံပါတ် 11.E11 ရပ်ခန်းမနံပါတ် 55 ရပ်
ထုတ်လွှင့် Beat ရဲ့ခေါင်းစဉ် & ဧည့်ဇယား
သောကြာနေ့ ကုမ္ပဏီ အမည် ခေါင်းစဥ်
ယခုထက်ကျော်လွန် 4K, ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုမှ post မှကင်မရာကိုထံမှစိန်ခေါ်မှုများ။ ကို Canon ပတေရုသ Yabsley Professional ကထုတ်ကုန်များစျေးကွက်အသင်းခေါင်းဆောင်, Professional က Imaging ကအုပ်စု, ကို Canon ဥရောပ
Amberfin (Dalet) ဘရုစ် Devlin ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မီဒီယာသိပ္ပံပညာရှင်
Phabrix ဖီးလ်အဒမ် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး
Sony က ပတေရုသ Sykes မဟာဗျူဟာမြောက်နည်းပညာ Manager ကို
ယနေ့ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် လာမယ့် 5-10 နှစ်များတွင် ကယှဉ်ပြိုင်ပါဘူး ဒါဟာဖြင့်အင်တာနက်သို့မဟုတ်ပေါင်းစည်း? ဖြန့်ဖြူး, သိမ်းဆည်းခြင်း, နည်းပညာ, ဘယ်လိုလိမ့်မည် ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှု။
ထုတ်လွှင့်ကွန်ယက် (BCN) Malcolm ရော်ဘင်ဆင် ဒါရိုက်တာမီဒီယာနှင့်အသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်း
Panasonic က ရော့ Tarrant Panasonic ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာ Solutions များအတွက်အကြီးတန်းကုန်ပစ္စည်း Manager ကို။
ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ Glodina Connan-Lostanlen, ဒါရိုက်တာ ofProduct စျေးကွက်မှာ ဆက်သွယ်ရေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ
Facilis နည်းပညာ ဂျိမ်း McKenna ဒုတိယသမ္မတ
လွန်စွာလိုလားသော Dave Colantuoni မှာကုန်ပစ္စည်းစျေးကွက်များအတွက်အကြီးတန်းဒါရိုက်တာ လွန်စွာလိုလားသော
တားမြစ်ထား Technologies က plc စတီဖင် Streater စီအီးအို
Autodesk မောရစ် Patel က Entertainment ကစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Manager ကို
မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေး - တိုးတက်မှု, ထိုကိစ္စများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ
Transmedia Dynamics ကို တိုနီတေလာ TMD ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်စီအီးအို
Editshare ဂျက်ဖ် Herzog ကုန်ပစ္စည်း Manager ကို
Movidiam ဂျော့ခ်ျ Olver တည်ထောင်သူ
ထုတ်လွှင့်မဂ္ဂဇင်းအမ်စတာဒမ်အတွက် 2014 IBC ပြရန်ထံမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေသည် Beat!
streaming များကဗီဒီယို Ustream အားဖြင့်အသက်ရှင်
4K 4K ယခုထက် ကျော်လွန်. အသံလွှင်း ယနေ့နှင့်မနက်ဖြန်ထုတ်လွှင့် IBC 2014 Janet အန်းအနောက် မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု post ကိုထုတ်လုပ်မှု သိုလှောင်ခြင်း Teradek တိုက်ရိုက် Ustream 2014-09-11
ယခင်: Broadpeak မိုဘိုင်းကွန်ယက်များအတွက်၎င်း၏တိုက်ရိုက်တီဗီ Delivery ဖြေရှင်းချက်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပါရန် Nokia ကကွန်ယက် '' AppFactory ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
နောက်တစ်ခု: Pronology အဆိုပါ 2014 IBC Show မှာက Adobe Premiere Pro ကို CC ကိုများအတွက် Pronology Panel ကိုပြသ